Réponses pour «satria»:
Total: 50 résultats - 0.071 secondes
Rariny raha manontany izany ny olona satria ny hananana mpitondra dia hanazava ny lalana iaraha-mizotra, ny tanjona iaraha-manatratra sy ny anjara ezaky ny tsiraray ary ny enti-manana ho amin’izany.
METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel 99%
Rehefa tsy misy ny zavatra manery dia amin’izay no vao mainka tsy misy ny fahafahana satria manimba ny fahafahana izany.
TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 99%
Nefa na izany aza dia mba tehizara traikefa sy fahalalana momba ny fanabeazana izahay satria adidy masina eo amin’ny mpiara-belona izany.
KORBATANE 5 version 2015 93%
Ialana tsiny mialoha izay mety tsy fahatomombanana satria ny tena tsy matihanina (professessionnel na mivelona) amin’ny fampielezana ny finoana fa mbola tsy maintsy mitady izay hohanina aloha ka izay no tsy dia ananana fotoana ampy handalinana sy hikarohana zavatra maro.
Ny lehibe indrindra dia ny hahavoavonjy ny fanahin’ilay namana itoriana.Ilaina ny mizara izay azo satria « efa nahazo maimaimpoana ianareo koa manomeza maimaimpoana » hoy ny ao amin’ny Matio 10:8.
LESONA 2 89%
satria eny ambony tsipika no fanoratana dia tapahina avokoa izay rehetra midina any ambany tsipika ka izay hita eny ambony tsipika fanoratana ihany sisa no ajanona ka asiana tsipi-panohizana mamonjy ny litera ao aoriana.
KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY 88%
Ialana tsiny mialoha hatrany izay mety tsy fahatomombanana satria ny tena tsy matihanina (professessionnel na mivelona) amin’ny fampielezana ny finoana fa mbola tsy maintsy mitady izay hohanina aloha ka izay no tsy dia ananana fotoana ampy handalinana sy hikarohana zavatra maro.
L'amour de Dieu 88%
Satria fantany tsara fa 3.
LESONA 4 87%
ِ ‫إِ ْسم ا ْل ِب ْن‬ ‫ت نِ َهاد‬ ِ َ‫إسم اال‬ ‫ب‬ ْ Ny teny hoe ISMoun dia voafaritra eto saingy tsy azo asiana ny mpamaritra AL velively izy satria milaza fananana.
Ny Baiboly - ( Tenin'Andriamanitra ) 87%
3 Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy.
GALILIA 2021 V.2 Fiarahabana 87%
Maniry ny hifanatritava isika Leo ny fihobohana Ka toa zay vao mahatsapa Fa tsara kay ny fiarahana Tsy hihaona anefa isika @izao fiandoahan’ny taona vaovao izao, toy ny fanao Ny Fitandremana tsy midika hakanosana Fa ny Tompo hanatanteraka ny fikasana Tsy sanatria fahakelezam-pinoana koa Fa tena fahokiana ny Tompo Ray tsitoha Ka rehefa tonga ny fotoana izay hiarahana mihaona irina tsy ho ela Satria ny aretina ho tavela Dia hiara hisaotra nyTompo Satria voavonjy ny mpanompo Ka hitorebika sy hifaly Isika mpianakavy Eo ampiandrasana izay fotoana izay Dia samia mandray ny FITAHIAN-DRAY Ka samy hitandrina ny didy Isika olo boafidy.
LESONA 10 86%
Hanao famerenana amin’ny ankapobeny isika amin’ity lesona manaraka ity no sady hiezaka hanao fampiasana maromaro satria hitosaka ireo voambolana manomboka amin’ny tohin’ny lesona manaraka eo koa izay no tsara hanamafisana an’ireo fahalalàna fototra hitantsika hatreto.
TADY LAHARANA 186 86%
Raha fintinina dia foana hatreo ny elanelan-tany satria na any Vietnam ianao, na any Norvège, na any Amerika, na any Israely, na any Mauritanie, na any Besalampy, na etsy Analamahitsy, na aiza na aiza, dia ho toy ny eto Soama ihany raha vao manokatra ny pejin=ny gazety Mahal as ana er i t r er i t r a Ny t eni n=ol on- kendr y i r ay :
Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana 86%
Hadihady iarahana amin’i Naina RAKOTOMALALA Mpanofana momba ny Fifeheza-mitarika sy fampivoaran-tena Tsy vitsy amin’ ny tanora, indrindra ny mbola mpianatra no handalo amin’ ny fisedrana fotoam-panadinana ato ho ato.Ilaina araka izany ny manamboatra sy mandamina ny fombafomba samihafa entina hiomanana azy.Na ahoana na ahoana anefa dia tsy maintsy miainga amin’ ny fikolokoloana ny fitadidiana (Mémoire mentale) izany satria io no miantoka ny dingana rehetra.
Ity andininy ity no tononin’ny Fiangonana FJKM aorian’ny famakiana ny Soratra Masina satria andininy mampifamatotra ny fahamasinana amin’ny Tenin’Andriamanitra.
Article GBUT n°02 2014 85%
kanefa aoka tsy amaivanina na adinoina satria ny Tompo mihitsy no mandidy antsika ny amin’izany.
Azo itokisana io tarehimarika io satria voalaza fa 70% ny lehilahy Malagasy dia mahery setra amin’ny vadiny.
SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO 83%
Karazana lahatsoratra teolojika somary mandray roa ihany izy ity, saingy ny REM no tena heverina ho manan-danja satria dia tsapa mihitsy fa tena mila fanavaozana ny fomba fitoriana ny Filazantsara ankehitriny, mba hahatanteraka ilay Tenin’ny Tompo hoe « Ataovy mpianatra ny firenena rehetra » (Matio 28 :
KORBATANE 5 version 2016 colour 82%
AMBOHIBAO 17 nov 2012 80%
Izany fanevan’ny fivoriana izany, izay avy amin’ny Apokalipsy 2:10, dia azo raisina ho fotokafatry ny Boky Apokalipsy, azo amintinana ny hafatra rehetra ao amin’ny Boky manontolo, satria ny Boky Apokalipsy manontolo, na ny firafitra izany, na ny anton’ny nanoratana, sy izay rehetra mombamomba azy, ny Boky manontolo dia voasoratra ho fampaherezana ny Fiangonan’Andriamanitra tamin’izay fotoana izay, sy amin’ny fotoana rehetra, Ary izay miteny izany teny izany dia Jesosy Tompo, Izay ao amin’ny voninahiny, Izay manafatra ny Fiangonany mba hahatoky hatramin’ny fahafatesana, Hahatoky amin’ny fihazonana ny finoana, amin’ny tsy fandavana ny anaran’i Jesosy eo anatrehan’ny zava-tsarotra rehetra izay tsy maintsy mitranga;
korbatane 4 2018 79%
Koa mangataha famelana matetika ianareo satria Allah dia Mpamela heloka sy be indrafo.
Bulletin Mensuel Tresor N37 79%
Mahazo tombony ihany koa ireo Vondrona itsinjaram-pahefana satria ara-potoana ny fikirakirana ny vola miditra mba hahafahan’izy ireo manatanteraka ireo asa fampandrosoana samihafa.
KORBATANE 7 NY VAVAKA MAMATONALINA AS SALATOUL LAYL 77%
Ny fahatoniana (satria voaaro amin’ny zava-dratsin’ny fiainana) sy ny fiarahana amin’ny…… Zanahary,Ilay Masina sy Avo indrindra, dia nanome baiko an’ilay farany tiany amin’nyzavaboahariny rehetra (tsy iza izany fa i Mohammad ‘S’) mba hifoha amin’ny alina ka Korbatane n°7 Ny vavaka mamatonalina (s’alat al layl) houssencharly@gmail.com Page 1 sur 7 hanatanteraka an’ity s’alat al layl ity.